६ बुँदे माग राख्दै डा केसीले सुरु गरे १६ औं अनसन,के- के छ माग ? (विज्ञप्ती सहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
६ बुँदे माग राख्दै डा केसीले सुरु गरे १६ औं अनसन,के- के छ माग ? (विज्ञप्ती सहित)
काठमाडौं । डा. गोविन्द कसीले सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता पालना नगरेको भन्दै १६ औँ अनसन सुरु गरेका छन्।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आफूसँग भएको सहमति विपरीत विधेयक पारित गरेपछि अनसनका लागि डा. केसी इलाम पुगेका थिए। डा केसी इलामस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालयमा बुधबार साँझ ५ बजेदेखि अनसन बसेका छन्। अनसन बस्नुअघि डा. केसीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नेका साथै वित्रप्ति समेत प्रकाशित गरेर आफ्ना कुरा राखेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसैबीच द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधहरुमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।’
डा. केसीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु कर्मचारीलाई बलीको बोका बनाउँदै ्भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनभन्दा माफियाको पक्षमा काम गरेको बताएका छन्।
‘साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार कानुनै बनाउन अहिलेको लागीपरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउने बहस सुरु, चीन पनि सकारात्मक
काठमाडौं । वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि छिमेकी देश […]
दोलखामा फेरि भूकम्प
साउन ३० । काठमाडौँ, शनिबार बिहान १० बजेर १० मिनेट जाँदा दोलखा गौरीशङ्क संरक्षण क्षेत्र केन्द्रविन्दु भएको […]
बैतडी । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बैतडीका छजनाको धरौटी जफत भएको छ । […]
सिड्नीमा ” तीज धमाका २०१७”हुने:
महेश्वर शर्मा सिड्नी अष्ट्रेलिया अजी फाईनान्स होमलोनको प्रस्तुतीमा सिड्नीमा " तीज धमाका […]
गत निर्वाचनमा धेरै कुरामा नजर अन्दाज गर्न बाध्य भए: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
असनेपाल न्युज सम्बाददाता असार ३२, काठमाडौँ- नागरिकको राजनीतिक अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्न निर्वाचन गर्नै पर्ने […]
नयाँबसपार्कमा नवनिर्मित हिरासत कक्ष भवनको उद्घाटन
गोपीकृष्ण चापागाई । महानगरीय अस्थायी प्रहरी गागबु नयाँबसपार्कमा नवनिर्मित हिरासत कक्ष भवनको समुद्घाटन समारोह […]